30 Kununurwa manamato ekupesana nekukura kusingadiwe mudumbu | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Kununurwa manamato emunongedzo pamusoro pekukura kusingadiwe mudumbu
30 Kununurwa manamato emunongedzo pamusoro pekukura kusingadiwe mudumbu
26 Hakungashaiwi vana vavo, kana kuva mhanje, munyika yako.
Vana inhaka yaIshe, saka hapana mwana waMwari anotenderwa kurasikirwa nemwana wavo. Uyu makumi matatu emunamato unonongedzera kunopesana nekusakurira kukura mune chibereko ndeavo vari kuwana zvakaoma kubata mudumbu nekuda kwekumwe kukura mudumbu ravo kana muviri wavo. Kukura uku kunowanzo kukonzera kukukanganisa kana zvimwe zvinonetsa zvinodzivirira kubata kwepamuviri. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti chero chirwere chiri mumuviri chinobva kuna dhiabhori. Act 10:38. Kuna Mwari kuda kwekupedzisira kuti uve wakasununguka kubva mukubata kwese kwadhiabhori, kusanganisira hosha nezvirwere.
Paunonamata minamato yekununurwa nhasi, kukura kwese mudumbu rako kana chero chikamu chemuviri wako kuchasanganiswa muzita raJesu. Hapana chinhu chisingagone kuitwa naMwari wedu, namata munamato uyu nekutenda uye tarisira zvishamiso ipapo paunonamata. Mwari kuburikidza nemunamato uyu wekununura vanonongedza kukura kusingadiwe mudumbu mako, kuchenesa dumbu rako uye nhengo yako yese yekubereka uye kukuita kuti uve nepamuviri uye utakure nhamba yaunoda yevana nhasi. Usarega Mwari, Mwari wedu achiri kupindura minamato. Namata nekutenda nhasi ugamuchire chishamiso chako.
1. Baba, ndinokutendai nekuda kwesimba rekununura kubva kune chero rudzi rweuranda.
2. Ndinovhara chibereko changu neropa rinokosha raJesu.
3. Baba, chengetera moto wako wekuchenesa, geza chibereko changu, muzita raJesu.
4. Baba, rega zvakaipa zvese zvevavengi vachipokana nehupenyu hwangu zvidzokere mumisoro yavo muzita raJesu.
5. neropa raJesu, ndinosuka chitambi chose chomuvengi pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
6. Neropa rako, ndinoburitsa system yangu kubva kwese satanic deposits, muzita rakasimba raJesu.
7. Ndinozvisunungura kubva muhusungwa hwekunonoka kubata pamuviri, muzita rakasimba raJesu.
8.Ishe, paradza nemoto wako chero chinhu chinomira pakati pangu nekubuda kwangu muzita raJesu.
9. Rega ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro geza geza chibereko changu kubva pakukora kusingadiwe muzita rajesu
10. Rega ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro ngaisuke chiberekero changu chakachena kubva muminda yakashata muzita raJesu
11. Rega ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro geza geza chibereko changu chakachena kubva kune zvakashata zvakaiswa kubva kumweya murume muzita raJesu
12. Ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro ngaishambidze chibereko changu kubva pakusachena kwakawanikwa kubva mukusvibiswa nevabereki muzita raJesu
13. Rega ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro ngaisuke dumbu rangu rakachena kubva pakudya kwakaipa kwemweya muzita raJesu
14. Regedza ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro ushambidze chibereko changu kubva kuzvirwere zvakavanzika muzita raJesu
15. Rega ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro geza geza chibereko changu kubva kune satanic remote control in the name of jesus
16. Regedza ropa, moto uye nemvura mhenyu yeWekumusoro-soro ngaishambe dumbu rangu rakachena kubva kune huturu hwaSatani muzita raJesu.
17. Ini ndinoburitsa uye ndinopfuudza chero dhiabhori satanic mu nhengo dzangu dzekubereka, muzita raJesu.
18. Ini ndinoburitsa uye ndinopfuudza chero dhiabhori satanic mudumbu rangu, muzita raJesu.
19. Muzita raJesu, ndinoparidza kuti muviri wangu itembere yaIshe, nokudaro hapana dhiabhori angandikunda zvakare muzita raJesu.
20. Ndinoraira ruoko rwese rwusinganzwisisike rwakaiswa padumbu rangu kuti ruome ikozvino, muzita raJesu.
21. Muzita raJesu, Ini ndinoramba, ndinopwanya uye ndinosunungura kubva kuzvisungo zvese zvechidhimoni muzita raJesu
22. Muzita raJesu, ndinunure kubva mukutuka kwakaipa kese, ngetani, zvipenga, jinxes, huroyi, huroyi kana huroyi izvo zvingave zvakaiswa pandiri.
23. Rega chishamiso chekusika chiitike mudumbu rangu nemweya wekubereka, muzita raJesu.
24. Baba, ndinoparidza kuti zvombo zvese zvakagadzirirwa kurwisa ini kubata kwangu hazvibudirire muzita raJesu.
25. Ini ndinosunungura kubva pamasimba ose akaipa, mweya yakasviba uye kusungwa kwasatani, muzita raJesu.
26. Ini ndinoreurura uye ndinotaura kuti muviri wangu itembere yeMweya Mutsvene, kuregererwa, kusukwa, uye nekucheneswa neropa, ini handizombove munhu akabatwa nekusabereka muzita raJesu
27. Ndinosunga, kupamba uye kupa kwese murume akasimba akapihwa mudumbu rangu, maitiro ekubereka uye hupenyu hwewanano, muzita raJesu.
28. Mwari unomutsa vakafa, muraramisa chiberekero changu uye yekubereka, muzita raJesu.
29. Ndinozvisunungura kubva pamidzimu yemweya wekubereka, kubereka uye kusava nechokwadi, muzita raJesu.
30. Baba, ngavatore ngirozi dzako dzemoto dzichitenderedza chiberekero changu, kubva panhumbu kusvika mukusununguka kwakachengeteka muzita raJesu amen.
Previous nyaya20 minamato Yeminyengetero ine simba yekumutsa vakafa
inotevera3 Kwemazuva Kutsanya uye Munyengetero uchirwisa Yakatangwa Strongman
Michelle Adolphe Nyamavhuvhu 7, 2019 At 10:37 am
Ini ndawana chaiyo minamato mikana yekutaura panguva chaiyo amen. Ini ndinoda chaizvo kununurwa muzita raJesu
Maame Sarpong Zvita 2, 2019 At 10:39 pm
Mwari vakuropafadzei Munhu wa Mwari
Robinah Chivabvu 2, 2020 nenguva dza 7:29 pm
Rumbidzai Mwari ndinofara chaizvo kune aya anoshamisa minamato eminamato ini ndinofara Mwari vakuropafadzei munhu waMwari
Makumi mashanu. Gakava rePfungwa dzeMunamato Pokana nevavengi Pabasa
Minamato yeBudiriro uye Prosperity